YEYINTNGE(CANADA): Sunday, June 08
(Why MYANMAR is in trouble)မြန်မာပြည်ဘာလို့ဒုက္ခရောက်...........................။
Why MYANMAR is in trouble............................
Population: 56 MILLIONS
9 Millions retired
30 millions in States & Townships Employees
17 millions in Central Govt. in NPT
1 million IT professional (don't work for Myanmar )
25 millions in school
1 million are under5years
15 millions unemployed
1.5 millions, u can find anytime in hospitals
U are busy ' READING' yeyintnge.blogspot.com /sending fwds LINK.. '..!!
HOW CAN I HANDLE MYANMAR alone?
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/08/20083အကြံပြုခြင်း
အိုဘားမား သမ္မတဖြစ်ရေး ထောက်ခံကြဖို့ ကလင်တန် နိုးဆော်
မြို့တော် ၀ါရှင်တန်ဒီစီရှိ အမျိုးသား ပြတိုက် ခန်းမကြီးထဲတွင် ထောက်ခံ သူများကို အထက် လွှတ်တော်အမတ် ကလင်တန် နုတ်ဆက် (ဇွန် ၇၊ ၂၀၀၈)
အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဟယ်လာရီ ကလင်တန်က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ပထမဆုံး ရွေးကောက်ခံရတဲ့ သမ္မတ ဖြစ်ဖို့ ကြိုးပမ်းချက်ကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလင်တန်က သူ့ရဲ့ ဒီမိုကရက်ပါတီအဖွဲ့ဝင် ဘားရက် အိုဘားမား သမ္မတ ဖြစ်ရေး ထောက်ခံကြဖို့ ပါတီဝင်တွေကို နိုးဆော် လိုက်ပါတယ်။ ၀ါရှင်တော်မြို့တော်ကနေ ဗွီအိုအေ သတင်းထောက် Kant Klein သတင်းပေးပို့ထားတာကို ဦးထွန်းအောင်က တင်ပြထားပါတယ်။
သမိုင်းဝင်အမျိုးသားပြတိုက်ခန်းမကြီးထဲမှာ အထက် လွှတ်တော်အမတ် ဟယ်လာရီကလင်တန်က သူ့ကို သောင်းသောင်းဖျဖျ ကြိုဆိုသူတွေကို နုတ်ဆက် ကျေးဇူးတင်ရင်း သူ စီစဉ်ထားတဲ့ပွဲအတိုင်း မဖြစ်ပေမယ့် ပရိသတ်ကို သူ နှစ်သက်တယ်လို့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ကလင်တန်က စနေနေ့မှာ သမ္မတ ဖြစ်ရေး ကြိုးပမ်းချက်ကို အဆုံးသတ်လိုက်ရင်း ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ တင်မြှောက်မှု ရရေးအတွက် သူ့ကို ကပ်ပြီး အနိုင်ရခဲ့သူ အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဘားရက် အိုဘားမား ကို ထောက်ခံဖို့ သူ့ကို ထောက်ခံသူတွေကို ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
“ဟယ်လာရီကလင်တန်ကို သူ နှစ်သက်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် သူက အလယ်အလတ်တန်းစား လူတွေကို ဦးဆောင်ပေးသူ ဖြစ်တယ်။ ပြည်သူ့အခွင့်အရေး၊ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေကို အခိုင်အမာ လုပ်ဆောင်ပေးသူ ဖြစ်ပါတယ်။” - လို့ ကလင်တန်ကို ထောက်ခံသူတစ်ဦးက ပြောခဲ့ပါတယ်။
“ကျမတို့ ပြိုင်ပွဲ စတဲ့အချိန်က နေရာတိုင်းမှာ လူတွေက မေးကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ စစ်သေနာပတိချုပ်အနေနဲ့ တကယ် တာဝန်ထမ်းဆောင် နိုင်ပါ့မလားလို့ပါ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျမ အဖြေပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ အာဖရိကအနွယ် အမေရိကန်လူမျိုးဟာ သမ္မတ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားလို့လည်း မေးကြပါတယ်။ ဒါကိုတော့ အထက်လွှတ်တော်အမတ်က ဖြေကြားခဲ့ပါပြီ။”
ဟိုင်းကြီးကျွန်းမှာ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်း ဖြန့်ဝေမှု မမျှတ
ဧရာဝတီတိုင်း ဟိုင်းကြီးကျွန်းဘက်မှာ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံထားရတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် ကူညီ ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းတွေကို စစ်ဘက်နဲ့ အရပ်ဘက်ခွဲခြားပြီးတော့ ဝေမျှတာကို ခံနေရပါတယ်တဲ့။ ခက်ခက်ခဲခဲ လာရောက် လှူဒါန်းနေတဲ့ ပုဂ္ဂလိက အလှူရှင်တွေရှိပေမယ့် ဒုက္ခသည်တွေဟာ နောင်ရေး အတွက် ရိက္ခာစိတ်မချရလို့ ချွေတာ စားသောက်နေကြရပါတယ်။ လူသေ အလောင်းတွေလည်း မရှင်းရသေးတဲ့အတွက် အဲဒီဒေသဘက်သွားပြီးတော့ လှူဒါန်းတဲ့ ပုဂ္ဂလိက အလှူရှင်တွေမှာလည်း အခက်အခဲတွေ တွေ့နေရပါတယ်။ အဲဒီလို သွားပြီးတော့ လှူဒါန်းတဲ့ စေတနာရှင် အဖွဲ့တဖွဲ့ကို ဦးရော်နီငြိမ်းက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ရွာရဲ့ ချောင်းထဲမှာ အလောင်းတွေကတော့ ပြန့်ကျဲနေတာပဲခင်ဗျ။ အစိုးရဘက်က ဘာမှ ထောက်ပံ့မှုလည်း မရှိဘူး။ ရှင်းလင်းမှုဆိုတာက ဝေးရော။ အစိုးရထောက်ပံ့မှုဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ သွားတဲ့ တလမှာလေ ယံယံ ခေါက်ဆွဲလေး တထုတ်၊ ကြက်သွန် ၂တက်၊ အာလူး ငါးလုံး အဲဒါပဲ ရခဲ့ဖူးတယ်ပေါ့။”
အစိုးရ ၀န်ထမ်းပိုင်းတွေမှာရော ဘယ်လိုရှိသလဲခင်ဗျ။
“ဟိုင်းကြီး ရေတပ်က သတင်းကြားကတည်းက တောင်ပေါ်တက်နေကြတာကိုး။ စစ်သဘောင်္ာ ကတော့ ကမ်းပေါ်တင်နေတဲ့ကောင်တွေလည်း တွေ့နေရတယ်။ သူတို့ကတော့ အပြင် ထောက်ပံ့ မှုတွေ ကိုလည်း မှီပြီးတော့ ယူထားတဲ့ဟာတွေလည်း ရှိကြတာကိုး။ နိုင်ငံတကာက လှူထားတဲ့ ရေသန့်စက် နှစ်လုံးရတယ်။ အဲဒီရေသန့်စက်ကို ဟိုင်းကြီး ရေတပ်ကလာပြီးတော့ သိမ်းသွားတယ်။ သူတို့ အကြောင်းပြတာကတော့ အဲဒီမှာ သုံးမယ့် လျှပ်စစ်က မရှိတဲ့အတွက် မင်းတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီး ရေတပ်က လာယူသွားတာပဲဗျ။ ပြည်သူအတွက် ရေသန့်ဗူး တစ်ဗူးပေးရင် သူ့စစ်သား အတွက်ကတော့ ရေသန့်ဗူး ကဒ်လိုက်ကို ပေးတာခင်ဗျ။ အိမ်ထောင်စုအတွက် ၁၀ယောက်ကို တဗူးပေးနေတဲ့အချိန်မှာ စစ်သားတယောက်ကို ရေသန့် တကဒ်အဲလိုအထိပေးတယ်။ ဒါဟာ အရပ်သားနဲ့ စစ်သား ခွဲခြားထားမှုပေါ့။ ပြည်သူကဝေနေတာကတော့ အရပ်သားကို အဓိကထားပြီး ထောက်ပံ့တာပေါ့ဗျာ။ အခွင့်အလမ်းချင်းကတော့ ဘယ်တူမလဲ။ အရပ်သား ၀န်ထမ်းလည်း ပြည်သူလူထုနဲ့ တန်းတူညီတူပဲ တန်းစီပြီး ခွဲတန်းလာယူနေရတာပဲ။ ”
သွားလှူတဲ့အခါမှာရော အာဏာပိုင်တွေဘက်က အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲ။
“လှူခဲ့တဲ့ ရွာတွေရဲ့ အလှူစာရင်းတွေ ပစ္စည်းစာရင်းတွေကို သူတို့က တောင်းတယ်ခင်ဗျ။ လူဦးရေ အချိုးနဲ့ သူတို့က တွက်ထားတယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီရွာတွေမှာ ဟိုင်းကြီး မြို့နယ်ခွဲ လက်အောက်မှာရှိတဲ့ ရွာတွေမှာ လူဦးရေ ဒီလောက်ရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီလောက်ပဲရသင့်တယ်။ ကျောက်ကလပ်ဆိုရင် ၂၁ရာခိုင်နှုန်း၊ ဟိုင်းကြီးကျွန်းဆိုရင် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းဆိုပြီး ခွဲတမ်းချထားတာပေါ့။ လှူခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းစာရင်းပေါ်ကို သူတို့က မှတ်ထားတယ်။ ခွဲတမ်းကျလာရင် ကျွန်တော်တို့ လှူခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းကို ပြန်နုတ်ယူမှာ။ ရွာသားတွေကလည်း ကျွန်တော်တို့ တိုက်ရိုက်လှူတာကိုပဲ လိုချင်တယ်။ ကျွန်တော် တို့ ထောက်ပံ့တဲ့ ရိက္ခာကိုပဲ ချွေတာပြီး စားနေကြရတာ။ တချို့ဆို ထမင်း တနပ်ပဲ စားနိုင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပေးတာ အားလုံး မစားရဘူး။ နောက်ထပ်မရောက်လာရင် ထမင်းငတ်မယ် ဆိုပြီး ဒါတွေကို စုဆောင်းထားရတာ။ ထောက်ပံ့လာမယ့် သတင်းကို ပဲ ထိုင်ပြီး မျှော်နေကြရတာ။ မရကတို့က ဆန်လှူမယ်ဆိုပြီး ဆန်စုနေတာကြာပြီ။ ဆန်တွေ ဒီအတိုင်းပုံထားတာ ကြာပြီ။ ကြွက်စာ၊ ငှကခ်စာပဲ ဖြစ်နေတာ။ ဟိုကို မရောက်နိုင်ဘူး။ ဆန်တွေက ရရကတို့ကလာတော့ ထည့်လိုက် ရတာပဲ၊ မရောက်ဘူးဆိုတာလည်း သိနေရတာပဲ။ ရရကက ကျွန်တော်တို့ အရင် စုထားပေမယ့် ကျွန်တော်တို့တောင် ၂ခေါက်ရှိနေပြီ၊ ကျွန်တော်တို့အရင် ရရကက စုထားတဲ့ ဆန်တွေက ဒီအတိုင်းပဲ ပုံလျက်ပေါ့။ နေရာမရွေ့သေးဘူး ရွာမှာ။ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းက မပို့နိုင်ဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းတွေတောင် မရောက်ရောက်အောင် ပို့နိုင်သေးတာပဲ။”
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/08/20080အကြံပြုခြင်း
The leader of the Burmese junta, Than Shwe, personally ordered the murder of scores of unarmed villagers and Thai fishermen, according toasenior diplomat and military intelligence officer who defected to America. Aung Lin Htut, formerly the deputy chief of mission at the Burmese Embassy in Washington, described toaradio station how 81 people, including women and children, were shot and buried on an isolated island after straying intoaremote military zone in the southeast of the country in 1998. After one general hesitated to kill the civilians, fearing that the commander who had given the order was drunk, he was informed that it came from “Aba Gyi” or “Great Father” – the term used to refer to Senior General Than Shwe, the head of the junta.
(Why MYANMAR is in trouble)မြန်မာပြည်ဘာလို့ဒုက္ခရော...